राज र वर्षा सिवाकोटी एउटै बिस्तारामा : रोमान्टिक मुडमा के गर्दैछन् ! | शुभयुग
राज र वर्षा सिवाकोटी एउटै बिस्तारामा : रोमान्टिक मुडमा के गर्दैछन् !
शुभयुग संवाददाताप्रकाशित मिति: २०७८ भाद्र १५, मंगलबार (१० महिना अघि)
१५ भदौ,काठमाण्डौ – गायक सुगम पोखरेल र गायिका सुष्मा विश्वकर्माको स्वर रहेको गीत ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ सार्वजनिक भएको छ ।
सत्यराज चौलागाँइको शब्द रहेको यस गीतमा सरोज प्याकुरेलले संगीत भरेका छन् । यस्तै, गीतमा उदयराज पौडेलले एरेन्ज रहेको छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा अभिनेता राज कटुवाल र अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको अभिनय छ । युवक र युवतीबीचको प्रेम र वाचाको कथालाई गीतमा उधिनिएको छ ।
भिडियोमा केही समयदेखि प्रेममा परेका राज र वर्षालाई देखाइएको छ । रामजी लामिछानेले कोरियोग्राफी तथा निर्देशन गरेको गीतको भिडियोमा सौरभ लामाकोे छायांकन रहेको छ । अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको भिडियोमा राज र वर्षालाई रोमान्टिक शैैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
भिडियोमा रेनिश फागोको कलर, सुरेश काफ्लेको ड्रोन, सरोेज पाण्डे र हरि काव्या थापाको मेकअप छ । भिडियोमा मुख्य सहायक छायांकारको रुपमा ईश्वर सिन्केमान र हिमाल श्रेष्ठले काम गरेका छन् । यसैगरी, सहायक कोरियोेग्राफरको रुपमा निर्मल खत्री र दीपक सिकेले काम गरेका छन् । भिडियोका प्रोडक्सन डिजाइनर सुदिप ढकाल हुन् ।